AmaProteas angase ayizwe ngendaba iWorld Cup
UNGQONGQOSHE wezeMidlalo eNingizimu Afrika usethathe isinqumo sokuvala ukusebenza kweCricket South Africa (CSA) ngenxa yokwehluleka ukuvumelana nezinguquko eziphakanyisiwe Isithombe: BACKPAGEPIX
Malibongwe Mdletshe | April 26, 2021
SINGASE sishaye sizwele kumaProteas isinyathelo sikaNgqongqoshe wezeMidlalo, uNathi Mthethwa, ngoLwesihlanu wavukela iCricket South Africa (CSA) esiswini njengotshwala ngokusebenzisa isigatshana somthetho obizwa ngeSection 13 emqulwini wokuphathwa kwezemidlalo, iNational Sport and Recreation Act.
Lesi sigatshana sika-13 sisho ukuthi iCSA iyophucwa amandla okwengamela ikhilikithi ezweni, kusuka ezinhlakeni zezinkulisa kuze kuyofika emaqenjini esizwe.
Ngaleyo ndlela amaqembu esizwe ayaphuma emidlalweni yamazwe, kulokhu i-International Cricket Council (ICC) kusho ukuthi amaProteas asengozini yokuyizwa ngendaba iT20 World Cup, okuwumqhudelwano olandelayo.
Okuveleli ngoLwesihlanu wukuthi isinqumo sikaMthethwa sifuphoqelelwe wukungavoti ngokuvumelana komengameli bezifunda abayisishiyagalombili beCSA.
Bebevotela ukuvumelana ngomthetho omusha, obuzokwenza abaqondisi beCSA bazimele kanjalo nosihlalo wenhlangano.
Abahlanu kwabayisishiyagalombili bavote ngokuphikisana bangavumelana, kwathi abathathu bangavota nhlobo.
I-ICC T20 World Mens World Cup amaProteas abezodlala kuyo ise-India ngo-Okthoba noNovemba.
IT20 World Cup ka-2020 yona egcine ihlehle ngenxa yokubheduka kweCovid19, yona kuthiwa izobuyiselwa khona e-Australia ngonyaka ozayo.
“Senginqume ukusebenzisa amandla ami ngaphansi kwe-Act (yezokuphathwa kwezemidlalo). Ngenza ngokulandela uSection 13, (5)(1)-(iii) wokungoqa nesabelo kwiCSA nokungayizisi (njengenye yezinhlangano eyengamele ezemidlalo kuleli)...,” kusho isitatimende sikaMthethwa.
Lokhu kusho ukuthi ikhilikithi izoma ukudlalwa eNingizimu Afrika uma lokhu okuvela kuMthethwa sekushicilelwe kwiGovernment Gazette, okusho ukuba semthethweni.
I-CSA kuze kube yimannje akukho okutheni esakushilo ngaphandle kokukhipha isitatimende, ivuma ukuthi ikubonile okushiwo ngungqongqoshe.
Ukuchithwa nguhulumeni kweCSA kuzoyishovela nakakhulu obishini ngoba izoqhubeka ilahlwe ngabaxhasi kwazise isivele inuka iqaqa ngenxa yezinkinga zangaphakathi ebuholini benhlangano.
Lezo zinkinga zihambisane nokumiswa isikhathi esingangonyaka kwesikhulu esiphezulu, uThabang Moroe owagcina ezibuyela ehhovisi ngodli.
Kube nemibuzo nangekusasa likaChris Nenzani njengomengameli wenhlangano, naye ogcine esulile.
Abaxhasi beminyaka bamaProteas, iStandard Bank vele kade bayilaxaza inhlangano neqembu lesizwe.